एनआरएनए निर्वाचन : बेलायत कुलमय | We Nepali
एनआरएनए निर्वाचन : बेलायत कुलमय
२०७६ असोज १८ गते ९:२५
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) को निर्वाचन नजिकिंदै जांदा अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यको पक्षमा बेलायतबाट एक सय ७० जना प्रतिनिधि देखिएका छन् ।
बेलायतबाटै आइसीसी अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी घोषणा गरेका आचार्यको पक्षमा स्वतस्फूर्त प्रतिनिधि देखिएका हुन् । एनआरएनए इतिहासमा पहिलोपटक बेलायतबाट त्यो पदसम्म आकांक्षी पुगेकाले यहांको नेपाली समुदायले गर्व र अवसरका रुपमा लिएको छ ।
‘हामीलाई पर्दा छिमेकी कुल नै चाहिन्छ, स्वार्थ बोकेका केही व्यक्तिको प्रलोभनमा समुद्रपारीकालाई समर्थन गर्न नैतिक रुपमा पनि सकिएन’- एक अभियन्ता भन्छन् ।
बेलायतबाट प्रतिनिधि हुन पाउने १ सय ८२ मध्ये १२ जनामात्र अर्का अध्यक्षका प्रत्यासी कुमार पन्तको पक्षमा उभिएका विश्लेषण गरिएको छ । विश्वकै ठूलो एनसीसी बनेको एनआरएनए यूकेबाट १ सय ८२ मध्ये एनआरएनए आइसीसी सदस्य रामशरण सिंखडा, आइसीसी मिडिया कोअर्डिनेटर चिरन शर्मा (देवराज आचार्य), आइसीसी विधान संशोधन समितिका डा. हेमराज शर्मा र उनीहरुसंग मित्रभाव रहेका गरि १२ जना पन्तको पक्षमा लागेका बताइएको छ । जसमध्ये ५ जना खुलेर लागेका छन् भने बांकी ७ जनाले सिंखडा र शर्माले जहां भन्यो त्यही भोट हाल्ने स्रोत बताउंछ । स्मरणरहोस् सिंखडा र शर्मा द्धय जिबा लामिछाने कोटाबाट केन्द्रमा नियुक्ति हात पार्ने भाग्यमानी हुन् ।
आचार्यले गत २४ सेप्टेम्बरको उम्मेदवारी घोषणा सभामा एनआरएनए यूके अध्यक्षमा विजयी पुनम गुरुङ र उपविजेता शेर सुनारलाई एकै ठाउंमा उभ्याएर गतिलो सन्देश प्रवाह गरे । त्यसकारण पनि पन्तका पक्षमा महोल बनाउन प्रयासरत सिंखडा, शर्मा (देवराज आचार्य) र डा. शर्मा असफल भए । ‘आचार्यको घोषणा सभापछि सबै पक्ष एकै ठाउंमा उभियो र कुल आचार्यको पक्षमा माहोल बन्यो’, एनआरएनए अभियन्ता कृष्ण भट्टले भने ।
कर्मभूमिमा आफन्तको बिहेमा जन्ती र मर्दाका मलामीका रुपमा रहेका यूकेवासी नेपाली आफ्नै छिमेकीलाई भोट दिन्छन् भन्नेमा सतप्रतिशत ढुक्क रहेको अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य बताउंछन् ।